TRF na ntanetị 2017 | Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ Akwụkwọ akụkọ na online
Home gbasara Anyị TRF na Press 2017
Ndị nta akụkọ ahụ achọpụtawo Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ ahụ ma na-agbasa okwu gbasara ọrụ anyị gụnyere: klas ịmara ịlụ ọgụ; akpọ maka irè, ụbụrụ dabeere n'ụmụ nwoke na ụlọ akwụkwọ; mkpa maka ọzụzụ maka ndị na-ahụ maka nlekọta ahụ ike na NHS maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ na onyinye anyị research na dysfunctions mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ. Peeji a gosiputara ụfọdụ ihe ịga nke ọma anyị na akwụkwọ akụkọ na ntanetị. Ọ bụ afọ anyị kacha mma.
2 Disemba 2017 - Ọrụ ozi ntanetị na Croatia. Mkparịta ụka zuru oke nke Mary Sharpe dị Ebe a na Croatian. Google Translate na-arụ ezigbo ọrụ na-emegharị ya n'asụsụ Bekee. Nke ọzọ, mbipụta ogologo nke nyochaa pụtara na akwụkwọ akụkọ kwa izu Glas Koncila na 16 November 2017 ma nwee ike ịhụ ya Ebe a.
16 October 2017 - soro site na nyocha Radio Sputnik
Ihe zuru ezu dị Ebe a online. A blog blog na nyochaa bụ Ebe a ma na-enye gị ohere ige ntị n'ịgba ajụjụ ọnụ zuru ezu.
10 October 2017 - TRF na PoliceProfessional.com, edemede nke Nick Hudson dere
9 October 2017 - TRF na akwụkwọ akụkọ mba
Ihe zuru ezu dị Ebe a.
Akụkọ zuru ezu dị Ebe a.
TRF na akwụkwọ akụkọ Business
4 October 2017 - TRF atụmatụ na ihu-ihu-akụkọ
27 Septemba 2017 - wardgwọ Ọrụ weregwọ bụ ndị na-akwado ọrụ maka Coolidge Effect na Edinburgh
23 Septemba 2017 - Regwọ Ọrụ weregwọ bụ ndị na-akwado ọrụ maka Coolidge Effect na Edinburgh
Ihe zuru ezu nke Christian Institute bụ nke dị n'Ịntanet Ebe a. A mbipute nke ọ pụtara na a Switzerland Christian website jesus.ch dị ka Pornography na-akpali Jugendliche zu sexuellen Straftaten na 13 September 2017.
Scottish Daily Mail, 4 September 2017. Akụkọ a dịkwa na ntanetị Ebe a.
The Herald, 4 September 2017, Page 12. Ọ dị n'Ịntanet Ebe a. A na-emegharị ya A na-akpọ Porn Internet maka ịrị elu nke na-akpata 18s mmekọahụ mpụ on Aadhu.com n’otu ụbọchị. Languagedị asụsụ German pụtara na webụsaịtị Austrian 'akụkọ akụkọ teknụzụ n'ọdịnihu' Schottland gibt Online-Pornos Schuld an Sex-Verbrechen.
Sunday Post, 3 September 2017. Akụkọ a dịkwa na ntanetị Ebe a. E bipụtakwara nsụgharị na Dundee na Newcastle mbipụta.
Akwụkwọ Ozi Sunday, 20 August 2017. Akụkọ a dịkwa na ntanetị Ebe a.
Enwere ike ịhụ ihe edere nke akụkọ akụkọ Scottish dị na addictionhelper.com Ebe a.